ठाउँ बचत लागि तह ढोका
मिति, त्यहाँ ढोका सबै प्रकार को एक विशाल चयन छ। एकै समयमा थप र थप उपभोक्ताहरु सजिलै हुन सक्छ कि बताए मोडेल तह छान्नुहोस् - ढोका को jamb आफ्नो निधारमा खुसी मौका सधैं सामान्य छ, र किनारा तह ढोका मा फ्लाई सफल असम्भाव्य छ। बस कारण कि तह ढोका plowed छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न।
, तह लागि ढोका खोल्ने परिक्रामी, परिक्रामी र ढोका स्लाइड प्रक्रिया द्वारा विभाजन। यसरी, किनभने यसको डिजाइन सुविधाहरू घुमाउँदा पर्यटकहरू एक उच्च प्रवाह संग क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ र परिचित हाम्रो लागि छैन। तह ढोका आदरणीय स्विंग को प्रयोगबाट विस्थापित गर्दैन "को जीनस को।" कथा भनेर जान्छ यस्तो मोडेल पुरातन अवधि देखि ज्ञात गरिएको छ। कोरिया र जापान को बोल्ने, यो तह को एक ठूलो संख्या छ कि टिप्पण लायक छ को भित्री मा ढोका यी देशहरूको जीवित कोठा impeccable कार्यक्षमता "accordions" देखाउन। निस्सन्देह, यो भित्री मा, जस्तै मोडेल धेरै सुविधाजनक गर्दै छन्, कम से कम मूर्ख प्रयोगको प्रविष्ट गर्न। पनि टिप्पण लायक को तह ढोका प्रदान राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन सुविधाहरु निर्मित गर्न सकिन्छ अनावश्यक आगंतुकों देखि कोठा रक्षा कि ताले गर्न सक्ने छ।
यसको कोर मा, यी ढोका - तह मोडेल को एक मिश्रण र हामीलाई धेरै पर्दे को सट्टा, प्रयोग गर्ने पारंपरिक अंधा। विगत देखि, तिनीहरूले रोलर को आन्दोलन प्रदान गर्दछ तेर्सो रेल, र साथै, प्लेट (lamellae), तर थप शक्तिशाली। को कपडे, को "पुस्तक" मा जस्तै तिनीहरूलाई परिवर्तन, को slats जडान जो छड,। तह ढोका प्रकार "बाजा" संकलित र हामीलाई अंधा गर्न परिचित सिद्धान्त मा माउन्ट। विभिन्न सामाग्री को आफ्नो उत्पादन प्रयोग गरिन्छ विशेष गरी लागि: परमवीर चक्र, काठ, MDF प्यानल।
स्विंग मोडेल विपरीत, तह र स्लाइड कुनै पनि खुलने बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। शीर्ष र तल रेल तिनीहरूलाई फैलाउने। उत्तरार्द्ध यसरी एक लगभग मौन गति चित्रहरु प्रदान गर्दछ। तह ढोका स्लाइड, जो को मूल्य यसलाई मूल जोडेको पात, त्यसपछि तिनीहरूले पर्खाल गर्न धक्का छन् भनेर सिद्धान्त मा काम गर्छ, यसको विभिन्न घटक मा निर्भर गर्दछ। यी मोडेल, एउटा सानो पर्याप्त ठाउँ कब्जा पूर्ण आफ्नो उद्घाटन समस्या द्वारा चयन बहिष्कार - यो एउटा सानो क्षेत्रमा फर्नीचर र उपकरण को नियुक्ति अनुकूलन।
क्षणमा, निर्माता फोटो जो तपाईंले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, दाग लागेको सिसा तह ढोका प्रस्ताव। हल्का फ्रेम प्रयोग काठ पातलो प्लेट, एल्यूमीनियम वा इस्पात प्रोफाइल, एक रंग fluted गिलास मा सम्मिलित छ जो बनेको सट्टा rigidity प्रदान गर्न। प्रयोग - चमकता पर्खालहरु स्लाइड सरल भिन्न पनि डिजाइन काठ slats सट्टा एक धातु फ्रेम। यो ग्लास रंग पारदर्शी फिलिम, साथै, प्रतिस्थापन पनि काठ वा फिलिम धो वालपेपर बनेको एक फ्रेम मा लगाउनु गर्न सम्भव पनि छ।
कार्यालय खाली जस्तै ढोका र विभाजन लागि सही, काम को लागि सहज अवस्था सिर्जना गर्न, जो सट्टा कृत्रिम छाला प्रयोग प्लाईवुड को प्लेट सार्दै को। कारण यसको अलमल्ल पार्नु एउटा बाङ्गो आकार हुन सक्छ। यस्तो घुसाउन स्लाइड विभाजन कठोर प्लाईवुड प्लेट लागि प्रयोग गर्नेहरू reminiscent।
खण्डका छत के हुन्?
विशेषताहरु, प्रयोग, तापमान, फ्लो: आउटडोर प्रयोगको लागि धातु मा प्राइमर। आफ्नै हातले आउटडोर कामको लागि धातु मा प्राइमर
लामबद्ध "KamAZ": ट्रयाक्टर, flatbed ट्रक, ढुङ्गा खानी र निर्माण डम्पर
सिट-नाशपाती लागि के फिलर रुचि?
पुरुषहरु कंगन सबै वर्ण भन्नेछु
Calves ड्राइभिङ र कसरी किन अप्रिय sensations छुटकारा गर्न
बुनाई को सरल योजना: वर्णन, प्रकार र सिफारिसहरू
Lena नदी बेसिन। को ढलान, लम्बाइ, tributaries निर्देशन, नदी बेसिन को सीमाहरु
कसरी स्क्राच देखि व्यापार गर्न? केही विचार
प्यालेस्टाइन समस्याको उद्भव वर्तमान चरणमा फिलिस्तीन समस्या